ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်နေနိုင်တဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ EPL ရဲ့ တရာသီအကောင်းဆုံးများ ၊ အတည်ပြုပြောဆိုမှုများစွာတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်နေနိုင်တဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ EPL ရဲ့ တရာသီအကောင်းဆုံးများ ၊ အတည်ပြုပြောဆိုမှုများစွာတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ဘောလုံးရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆု စကာတင် စာရင်းတွေကို ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အကောင်းဆုံး နည်းပြဆု အတွက် ဂွာဒီယိုလာ ၊ ဂျာဂင်ကလော့ ၊ သောမတ်စ် ဖရန့် ၊ အက်ဒီဟိုဝီ နဲ့ ပက်ထရစ် ဗီယာရာ တို့ စကာတင် ပါဝင် လာခဲ့ကြပြီး ဝက်စ်ဟမ်း နည်းပြ မိုရက်စ် မပါဝင်လာမှု အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ ကြပါတယ် ။
အကောင်းဆုံး လူငယ်ဆု အတွက်ကိုတော့ အလက်ဇန်းဒါး အာနိုးလ် ( လီဗာပူး ) ၊ ဖီးလ်ဖိုဒန် ( မန်စီးတီး ) ၊ ဂယ်လာဟာ ( ပဲလေ့စ် ) ၊ မစ်ချယ် ( ပဲလေ့စ် ) ၊ မေဆင်မောင့် ( ချဲလ်ဆီး ) ၊ ရမ်းစဒဲလ် ( အာဆင်နယ် ) ၊ ရိုက်စ် ( ဝက်စ်ဟမ်း ) နဲ့ ဆာကာ ( အာဆင်နယ် ) တို့ စကာတင် ပါဝင်လာခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဆာကာ နဲ့ အလက်ဇန်းဒါး အာနိုးလ် တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု အတွက် စကာတင် စာရင်းမှာလည်း ပါဝင်လာခဲ့ပြီး အာနိုးရဲ့ လီဗာပူး အသင်းဖော် ဆာလာ ၊ ဝက်စ်ဟမ်း ရဲ့ ဘိုဝင် ၊ မန်စီးတီး က ကန်ဆယ်လို နဲ့ ဒီဘရိုင်းနား ၊ စပါး ရဲ့ ဆွန်ဟောင်မင် ၊ ဆောက်သမ်တန် အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျိမ်းစ် ဝတ်ဒ် ပရောက်စ် တို့ဟာ စကာတင် ၈ ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီစကာတင် စာရင်းမှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် တလတာ အကောင်းဆုံးဆု ၂ ကြိမ် ရထားတဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို မပါဝင်လာမှုကို ဝေဖန် ပြောဆို ခဲ့ကြပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အဲရစ် တန်ဟတ် ရဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်လာမယ့် မစ်ချယ် ဗန်ဒါဂတ် နဲ့ စတိဗ် မက္ကလာရင် တို့ ၂ ဦး စလုံးကို ချိတ်ဆက် ဆွေးနွေးဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဂျုဒ် ဘယ်လင်ဟမ် က သူဟာ လာမယ့် ရာသီမှာလည်း ဒေါ့မွန် နဲ့ အတူ ဆက်လက် ရှိနေဦးမှာပါ လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် နဲ့ ရာသီအကုန်မှာ လမ်းခွဲတော့မယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ်လူ အဲလစ် ဝှစ်ဆယ် ကတော့ အခြား အသင်းတွေနဲ့ စတင် ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အသင်း ဥက္ကဌ ဟားဘတ် ဟိုင်နာ ကတော့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ အသင်း နဲ့ ၂၀၂၃ အထိ စာချုပ် ရှိနေပြီး အဆိုပါ ကာလ အထိ ဆက်ရှိနေ ပါမယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ဘိုင်ယန် နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းမတိုးတော့ဘဲ ဒီနှစ် နွေမှာတင် ထွက်ခွာဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်နေသူ ဖြစ်ကာ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း ရရှိ ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရိုမီရို လူကာကူ ကလည်း သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် ကို သူကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ အတွက် ဘယ်သူမှ ပြောဆိုပေးဖို့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း နဲ့ လက်ရှိမှာ အသင်းကို ရာသီ ပိတ်သိမ်း နိုင်ဖို့ အဓိက အာရုံစိုက်ပြီး ကူညီ ပေးနေကြောင်းတွေကို ဆိုရှယ် မီဒီယာ ကနေ ရေးသား ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် မိုနာကို မှာ ကစားနေတဲ့ စပိန် ကွင်းလယ်လူ ဆက် ဖာဘရီဂတ်စ် ကတော့ သူဟာ ရာသီအကုန် မှာ မိုနာကို နဲ့ လမ်းခွဲတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူးလေး ခီလီယံ အမ်ဘာပေ ဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျ တဲ့ ဆုံးဖြတ်မှု မချမှတ် ရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရီးရဲ ကတော့ ဘာပေ ကို အရ ခေါ်ယူ နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြောင်း သိရှိရ ပါတယ် ။
PSG ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ ကတော့ အသင်းပြောင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ ပြင်သစ် ကလပ် မှာသာ ဆက်လက် ကစားသွားဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ကေလာနာဗက်စ် ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ပင်တိုင် ပွဲထွက်သူ ဖြစ်လာဖို့ ကိုလည်း မျှော်လင့် ထားကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာ က ဘာနေဗျူးက ရှုံးပွဲဟာ စီးတီး က သူ့ရဲ့ အတိတ် ကိုရော အနာဂါတ် ကိုပါ ပြောင်းလဲ နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ ဒီအသင်းမှာ ဆက်ရှိနေ သွားမယ့်အကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရာသီကုန် အထိ နားရမယ်လို့ ဂွာဒီယိုလာ ပြောဆို ထားတဲ့ နောက်ခံလူ ကိုင်လ်ဝေါ်ကာ ဟာ စီးတီး ရဲ့ ရာသီပိတ် ပွဲစဉ် အမီ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ( ဖလားရဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ ) အသင်းနဲ့ အောင်ပွဲ ခံနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အမေရိကန် နောက်ခံလူ ဆာဂျင်နို ဒက်စ် ဟာ နူးကမ့် ကနေ ထွက်ခွာဖို့ စိတ်ကူး မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ် ။
မာဆေး အသင်းကတော့ အာဆင်နယ် ကနေ အငှား လာကစားပြီး ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ လူငယ် နောက်တန်း ကစားသမားလေး ဝီလ်ယံ ဆလီဘာ ကို လာမယ့် ရာသီမှာ ဆက်လက် ခေါ်ယူ ထားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် နဲ့ ဘရာဇီး ကလပ် ဆာအိုပေါ်လို တို့ အကြားမှာ တောင်ပံ ကစားသမားလေး မာကွင်ဟိုစ့် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေး နေကြတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဖွား ဘရာဇီးသားလေး အတွက် ယူရို ၃ သန်း ဝန်းကျင် ပေးချေရနိုင်ချေ ရှိပြီး ဆာအိုပေါ်လို ဘက်ကလည်း စာချုပ် ကုန်တော့မယ့် မာကွင်ဟိုစ့် ကို အလွတ်နဲ့ လက်မလွှတ် ရမီမှာ ထုတ်ရောင်းဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ အသစ် ရောက်လာမယ့် နည်းပြ အဲရစ်တန်ဟတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသင်းသား အားလုံး ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှား နေကြကြောင်း ၊ သူတို့ဟာ တန်ဟတ် ကို ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ ရော ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ပါ နှစ်သက်ကြကြောင်း ၊ လာမယ့် ရာသီမှာ တန်ဟတ် နဲ့ အတူ ဖလားတွေ ရယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ယုံကြည်ထားကြောင်း ဆိုရှယ် မီဒီယာမှာ ရေးသားရင်း လာမယ့် ရာသီမှာလည်း အသင်းနဲ့ ဆက်ရှိ နေနိုင်ကြောင်းကို အရိပ်မြွက် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ ကလပ် အက်စ်ပန်ညော် အသင်းဟာ န၄ည်းပြ ဗင်းဆင်း မိုရီနို နဲ့ ဒါရိုက်တာ ရုဖတီ တို့ ကို ထုတ်ပယ် လိုက်ပြီး နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစား နေသူတွေထဲက တယောက် ဖြစ်တဲ့ အီတလီ လူမျိုး နည်းပြ ဖာဘီယို ကန်နာဗာရို ကို ခန့်အပ်တော့မယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ဟာ လာမယ့် ကာတာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ဂေး ( Gay ) တွေကို တည်းခိုခွင့်မပြုမယ့် ဟိုတယ်တွေ ကို စာချုပ်တွေ ဖျက်သိမ်း သွားမယ်လို့ သတိပေး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်းဟာ ဂန္ထဝင် တိုက်စစ်မှူးကြီး ဆာဂျီယို အဂွေရို ရဲ့ ရုပ်တု ကို သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် ဖလားယူသွင်းဂိုး ၁၀ နှစ်ပြည့်တဲ့ ယမန်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ် ဂုဏ်ပြု ပေးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article အင်္ဂလန်ပြည်သူ့ အချစ်တော် လီဗာပူး ရဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားချိန်မှာ ၊ ချဲဆီးက ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ “လူဆိုးဘွဲ့” ခံယူသွားမယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သောမတ် တူချယ်
Next Article မန်စီးတီး ကို ရောက်လာမယ့် ဟာလန်း ကို ကြိုဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်အကြောင်း သတိပေးသွားခဲ့တဲ့ အဂွေရို